भदौ २० गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – paradeskhabar.com
September 4, 2021 477
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) :तपाईको दिन चिन्ता मुक्त्त हुनेछ । कार्यमा बाधा हुनेहुदा कम सम्पन्नहुन ढिला हुनसक्छ । पार्टनरको सहयोग मिल्ने छैन । दाम्पत्य जीवनमा लामो समयसम्म विवाद हुनेहुदा सजग रहनुहोला। व्यापारमा पार्टनरसँग सतर्क रहनुहोला। आदालतको विषयमा टाढै रहनुहोला । संसारिक बिषयमा मन आलिप्त हुनेछ ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) :सामान्य कुरामा पनि पती पत्नी बिच झगडा हुनसक्छ। संसारिक प्रश्न तथा बिषयले मनमा उदाशिन्ता छाउनेछ। अदालती कार्यमा सचेत पूर्ण तरिकाले चल्नुहोला । सामाजिक दृस्टीले अपमानित नहुन सचेत रहनुहोला ।नयाँ कार्यको थालनी गर्नु उचित हुदैन । शारीरिक जोश र उल्लासको अभाव हुनेछ। मानशिक द्विधा बढ्नेछ ।
मिथुन- का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) :यात्रा गर्दा बिशेस ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्यमा बिशेस ध्यान दिनुहोला । नकारात्मक बिचारमा ध्यान नदिनुहोला । यस्तो गर्नु भएयमा तपाई एकदमै खुशु हुनुहुनेछ । आकस्मिक खर्च हुनसक्छ। तर पनि दिनको मध्यान्न पछी मनमा केहि हल्का महशुस गर्नुहुनेछ । धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्नाले मनमा सक्ति प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) :तपाइको व्यहार धार्मिक हुनेछ । कुनै धार्मिक तथा मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । तपाईको व्यवहार न्याय प्रेमी रहनेछ । दिनको मध्यान्नपछी दिन निकै राम्रो र सफलपूर्ण रहनेछ । गरेका कार्य सफलता पूर्ण सम्पन्न हुनेछ । व्यवासायमा आफूभन्दा ठुलाको प्रोत्साहन मिल्नेछ । पदोन्नतिको योग रहेकोछ। पारिवारिक जीवनमा मधुरता छाउनेछ ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) :दृढ मनोबल र आत्मा विस्वाशको कारण कममा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यापार तथा व्यवसायामा तपाईको बुद्धि र प्रतिभाको प्रसंशा गरिनेछ। उच्च अधिकारीहरू तपाईको कार्यबाट खुसी हुनेछन् र पदोन्नतिको संभावना पनि बढ्नेछ। बाबुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ र लाभ हुनेछ । मध्यान्न पछी तपाई केहि विचारहरुमा फस्नु हुनेछ । व्यापारमा आर्थिक लाभ हुने योग बनेको छ । मित्रबाट लाभा हुनेछ ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) :भोलिको दिनमा साहित्य सिर्जना गर्न र कलात्मक क्षेत्रमा आफ्नो पहुच वृद्धि गर्ने समय रहेको छ । प्रियजन संगको भेटले मन प्रसन्न हुनेछ । दिनको मध्यान्न पछी घरमा शान्तिको वातावरण बन्नेछ। सत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरुसँग भावनात्मक संघर्स हुनसक्छ। कार्यालयमा आफूभन्दा आगाडीको अधिकारीहरु बाट सतर्क रहन पर्नेहुन्छ ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) :यात्राको योग बन्नेछ । मित्रहरुबाट लाभ मिल्नेछ । सन्तान संगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । मध्यान्न पछी मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । सचेत रहनुहोला । विवाद हुनबाट टाढा रहनुहोला। कानुनि कार्यमा सचेत रहेर निर्णय लिनुहोला ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) :तपाइको मन भावनात्मक हुनेछ । भावनामा बगेर अबिचारी कार्य गर्न सक्ने हुदा सावधान रहनुहोला। चर्चा तथा विवादबाट टाढा रहनुहोला। कसैसंग हिंसात्मक व्यवाहार हुनसक्छ । मध्यान्न पछी आत्मा बिस्वाश बढ्नेछ । समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ । रिशलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) :भोलिको दिन तपाइको आत्म विस्वास बढ्नेछ। कार्यमा निर्णय शक्ति बढ्नेछ। क्रोधको भावना बढ्नेछ। सरकारी कार्यमा लभ हुनेछ । परिवार जनसंगको सहकार्य राम्रो हुनेछ । आय भन्दा खर्च बढी हुनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) :दीर्घकालीन योजनाहरूको बिषयमा सोच्दा सोच्दै तपाई दुबिधामा पर्नु हुनेछ । परिवारका सदस्यहरू सँगको वातावरण तनावपूर्ण हुनेछ। निर्धारित काममा कम सफलता मिल्नेछ । मध्यान्न पछी तपाइको दिन राम्रो हुनेछ । शारीरिक तथा मनिशिक स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । भाइ बहिनि बाट लाभ मिल्नेछ । तपाइ कसैसँग भावनात्मक सम्बन्धमा बाधिनु हुनेछ ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) :कार्यमा सफलता मिल्नाले मन प्रसन्न हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउनु हुनेछ । तर दिनको मध्यान्न पछी घरमा विवादको वातावरण हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग तनाव हुन सक्छ र यसले मनमा पछुतो बढाउनेछ। आमाको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । नकारात्मक सोचले मनमा हतासता छाउनेछ। दिनको मध्यान्नपछी भाग्य वृद्धिको योग बन्नेछ ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) :भोलि आमाको स्वास्थ्यको कारण चिन्ता बढ्न सक्छ । अचल सम्पत्तिको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाट टाढै रहनुहोला। नकारात्मक बिचार बाट टाढा रहनुहोला । दिनको मध्यान्न पछी तपाईको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार हुनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि समय अनुकूल रहेको छ । तपाइ बाट केहि धार्मिक कार्य हुनेछ ।
Prevयो साता चम्किँदैछ यी ९ राशिको भाग्य, कुन हो तपाइँको राशी ? (साप्ताहिक राशिफल)
Nextनिकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल
आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पु’र्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठे’रो छ, नलडी जानु है !